Malunga Nathi- i-Guangzhou Red Sunshine Co., Ltd.
I-Guangzhou Red Sunshine Co., Ltd. ayingomenzi wobuchwephesha we-latex kunye neeglavu ze-nitrile,
kodwa bangabathumeli bangaphandle abanamava kwezinye iiglavu zokhuseleko ezifana neeglavu zesikhumba, iiglavu zomqhaphu,
riiglavu ezigqunywe nge-ubber,Iiglavu zamashishini zePVC, iiglavu ezilahlwayo.
Imizi-mveliso yethu ikwisixeko saseFoshan, kwiphondo laseGuangdong yasekwa ngo-2006. Igubungela indawo engaphezulu kwe-12000 yeemitha zesikwere, iphethe imigca emi-3 yokuvelisa ezizenzekelayo kwiiglavu zelatex kunye neeglavu zenitrile, umthamo wenyanga wemveliso unokuba ngaphezulu kwe-3,000,000 yezibini.Yaqaphela iiyure ezingama-24 zibaleka ngaphandle kokumisa, kunye namaqela ama-3 abasebenzi asebenza ngokulandelelana.Ngo-2019, sazisa oomatshini abatsha kunye netekhnoloji, ukusebenza kakuhle kuye kwaphuculwa ngakumbi.Sinebhubhoratri enye kunye namagcisa ama-3 anamava okuphuhlisa iimveliso ezintsha kunye nokuphucula iimveliso ezindala.
Umgangatho usoloko uphambili kuqala, abalawuli bekhwalithi baya kuvavanya iimveliso ngokungaqhelekanga ukusuka kumgca wemveliso, kwaye ngaphambi kokuba iimpahla zithunyelwe ngaphandle, baya kuhlola ngokucophelela umgangatho, ubuninzi kunye neepakethi.
Izixhobo ezininzi zeglavu ezisetyenziswa rhoqo:
(1) Ucingo - ucingo oluqhelekileyo lwensimbi engenasici, kodwa kunye ne-chromium i-alloy wire, isetyenziselwa ukwenza iiglavu ezixhathisayo ezisikiweyo.Olu hlobo lwezinto eziphathekayo lunamandla okumelana nokusikwa kwaye kulula ukulucoca, kodwa lunzima kwaye alusebenzi.
(2) i-nitrile (enelaphu lelaphu)- enezixhobo ezichasayo zokugqobhoza, eziguquguqukayo kwaye zikhululekile ukuyisebenzisa.
(3) i-latex yendalo (enelaphu elilaphu)- i-elasticity enhle, ngokukodwa i-flexible, inokumelana nokunxiba okuthile, ukuxhathisa ukukrazula kunye nokumelana nokusika.
(4) I-PVC (ngelaphu lelaphu)- inokubonelela ngokunxitywa okuthile kunye nokhuseleko lwe-Pierce, ukuba izinto eziphathekayo zinzima, kodwa zinokuba nokumelana nokusikwa okuthile, kodwa kungekhona ukuxhathisa ukukrazula.
(5) Isikhumba - izinto zendalo, ngeendlela ezahlukeneyo zonyango, zineempawu ezikhethekileyo.Isikhumba sinokwahlulwa sibe: Isikhumba senkomo, esinenzuzo yokukhululeka, ukuhlala, ukuphefumla kunye nokunxiba.Emva kokucutshungulwa kwechromium, iyomelela ngakumbi kwaye inako ukumelana nobushushu obuphezulu; Ulusu lwehagu, i pore likhulu, ukungeneka kokona kulungileyo, emva kokuhlanjwa kusenokugcina ukuthamba okuhle, kodwa kungabi nzima; Ufele lwegusha, sesona sitofotofo, sesona sihlala sihleli kwaye sichasayo. -nxiba ukusebenza kweyona nto ingcono.
Iiglavu zethu ziphumelele i-CE kunye nesatifikethi se-ROHS.Kule minyaka ili-14 idlulileyo, sinamava aneleyo e-OEM kwaye sinokuphendula ngokukhawuleza nangempumelelo kubathengi.
Siqokelele abathengi abaninzi bentsebenziswano yexesha elide kwaye sifumana izimvo zokwaneliseka kubo.Ngokusekwe kwimbono yokusebenza yokunyaniseka kunye nentsebenziswano, ukukhonza ngentliziyo, ukudala ixabiso, siya kuqhubeka siqhubela phambili ukuqonda imeko yokuphumelela kuzo zombini.